I-GUODA Inc ihlala isendleleni
Ukuphucula ubuchule bethu bokuyila izinto ezintsha, i-GUODA izakuthatha inxaxheba kwimiboniso eyahlukeneyo yasekhaya nangaphakathi. Eyona njongo iphambili ye-GUODA Inc. iya kwihlabathi liphela. Ke, besisebenza ngokuthatha inxaxheba kwimiboniso yehlabathi kwiminyaka eliqela edlulileyo. Siyathemba ukuba iibhayisikile zethu ezigqwesileyo ziya kubonakala, kwisam ...
Ukulungiselela iCanton Fair
Kwiveki ephelileyo i-Guoda Tianjin Inc. isebe lezentengiso belilungiselele iinkcukacha zokuqala ze-Intanethi ezithunyelwa ngaphandle kwi-Intanethi. thatse ...
I-China Canton Fair: UMboniso weBhayisekile ye-GUODA
Kwiveki ephelileyo i-Guoda Tianjin Inc. isebe lezentengiso belilungiselele iinkcukacha zokuqala ze-Intanethi ezithunyelwa ngaphandle kwi-Intanethi. Naleyo ...
Jonga i-Market kunye ne-Innovation i-GUODA Inc ihlala isendleleni
Ukuphucula ubuchule bethu bokuyila izinto ezintsha, i-GUODA izakuthatha inxaxheba kwimiboniso eyahlukeneyo yasekhaya nangaphakathi. Eyona njongo iphambili ye-GUODA Inc. iya kwihlabathi liphela. Ke, besisebenza ngokuthatha inxaxheba kwimiboniso yehlabathi kwiminyaka eliqela edlulileyo. Siyathemba ukuba iibhayisikile zethu ezigqwesileyo zinokuhlala ...
I-GUODA ithathe uxanduva lwazo zonke iimfuno zabathengi
Kutshanje, iibhayisikile zabantwana i-GUODA zisathengisa shushu kumazantsi mpuma eAsia. Abathengi abaninzi bakhetha uluhlu olukhulu lweemveliso zethu, ezinje ngebhayisikile yokulinganisa yabantwana, ibhayisekile yentaba yabantwana kunye nebhayisikile yabantwana enamavili oqeqesho, ngakumbi iitrayisikile zabantwana. Uninzi lwabathengi bethu, bakhetha ukukhetha ukwahluka ...
ngomphathi ku 20-08-25
Wamkelekile kwiNkampani ye-GUODA (Tianjin) yeNzululwazi noPhuhliso lweTekhnoloji! Ukusukela ngo-2007, sizibophelele ukuvula umzi-mveliso oqeqeshiweyo wemveliso yebhayisikile yombane. Ngo-2014, i-GUODA yasekwa ngokusemthethweni kwaye ibekwe kwi-Tianjin, eyona ...
Iindaba Ezilungileyo — IiNdawo zeBhayisikile ziyathengiswa
Sivula iwebhu ukuze sibonise inkampani yethu kwaye sikuphathele iimveliso zethu, ibhayisekile, ibhayisekile yombane kunye nebhayisikile enamavili amathathu, isithuthuthu sombane kunye nesithuthuthu, abantwana ibhayisekile kunye nezinto zabantwana. Ngo-2020, imarike yebhayisikile iyakhula. Ngokwemfuno yentengiso, siqale ukuthengisa izinto. Nika ngentando yakho ...
Siza kukubonisa imveliso yethu——E ibhayisekile
ngomphathi ku 20-08-06
Njengenkampani kwimveliso ye-e-bhayisekile, ukulawula umgangatho kubaluleke kakhulu. Kuqala, abasebenzi bethu bajonga izakhelo zebhayisikile zombane ezingalayiswanga. Emva koko vumela isakhelo sebhayisekile esine-welding esisigxina siqiniswe ngokuqinileyo kwisiseko esijikelezayo kwibhentshi yomsebenzi kunye negrisi esetyenziswe kumdibaniso wayo wonke. ...